Maitiro ekudzikisira kubva macOS High Sierra kusvika macOS Sierra | Ndinobva mac
Iyi sarudzo inowanika kune avo vashandisi vane iyo macOS Sierra vhezheni yakaiswa izvozvi kana kuti chaipo vane iyo yekumisikidza pane yakatogadzirwa USB. Kubva nhasi, patiri kunyora chinyorwa ichi, vhezheni nyowani yeMacOS High Sierra ichangoburitswa uye zvinoita kuti vashandisi vazhinji vasina iyo Mac yakagadziridzwa, mune ino kesi Izvo zvakakosha kuti ugadzire ino isingagadzike diski pane USB kana yekunze disk.
Kana iwe uchitova ne macOS High Sierra yakaiswa, sarudzo iyo yatinokuratidza nhasi ndeyekuwana iyo yapfuura vhezheni yeanoshanda system, macOS Sierra. Kuita downgrade pane zvimwe sarudzo asi chakanyanya kukurudzirwa uye chakavimbika ndeche gadzira iyi bootable USB kubva kuMac ine macOS Sierra yakaiswasezvo ichave yakavimbika uye ndeyechokwadi vhezheni. Izvo hazvina basa kana ichibva kuMac, Mac mini kana MacBook, vese vanoshanda zvakafanana.
Painternet tinokwanisa zvakare kuwana iyi vhezheni yeApple's operating system kana isu tinogona kana kudzikisira kubva kune yekare Time Machine kopi, asi zvakanakisa kuwana zvakananga kubva kuMac uye gadzira iyo inosimudza. Icho chinhu chaicho icho vashandisi vazhinji vanacho kana isu tichiita zero yekuisa mune yega vhezheni yakataurwa kuWWDC sezvo zvichidikanwa kuumba iyi USB, iyi inoshanda kwatiri zvakakwana.
Matanho ekutevera kudzoka ku macOS Sierra
Nhanho yekutanga ndiyo yakajairwa imwe: negadziriro yeparutivi kuna Time Machine kana zvakafanana kudzivirira matambudziko kana zvikatadza. Iri ndiro danho rekutanga mune zvese zviitiko uye nderekuti kana pasina iyi kopi ndipo panouya matambudziko ekurasikirwa kwedata, nezvimwe.
Iye zvino tinofanira kudaro gadzira iyo macOS Sierra inosimudzira Izvo zvinogona nyore kuitwa uchishandisa mashoma 8GB USB. Kuti tiite izvi, tinogona kutevera nhanho idzi dzakada kufanana nekugadzira macOS High Sierra installer uye kuita zero kuisirwa:
Kana isu tiine macOS Sierra muMac tinoisa iyo USB ye8GB kana kupfuura
Isu tinomisikidza uye tinotumidza USB kuti "Isina Musoro"
Isu tinovhura Terminal nekunamatira inotevera kodhi: sudo / Applications / gadza \_ macOS \_ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled –applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ Sierra.app –nointeraction
Isu tinopinda mushandisi password uye tinomirira kuti apedze
Kana maitiro aya apera (zvinotora zvishoma zvichienderana neiyo Mac uye USB kumhanya) zvese zvatinofanirwa kuita kuumbiridza diski yatiri nayo macOS High Sierra inoshanda sisitimu yakaiswa kubva kuDisk Utility uye ndizvozvo. Zvino yave nguva yedu gadza kubva kuUSB uye izvi ndizvo zvatinofanirwa kuita bvisa Mac uye ne USB yakabatana nekombuta painotendeuka tinya Alt, Isu tinosarudza iyo USB yekuisa macOS Sierra uye painopedza tichava neSierra kumashure paMac.
Zvinokurudzirwa kushandisa macOS High Sierra sezvo mutsauko uripo pakati pesisitimu mbiri idzi uri mushoma uye hatizoone kuvandudzwa patinotora vhezheni iyi, asi isu tinosiya izvi mumaoko ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzikisira kubva ku macOS High Sierra kusvika macOS Sierra
Kernel Panic akadaro
Ndingaite sei kuti ndigadzire iyo MacOs SIerra usb kana isisiri kuoneka muAppStore?
Pindura Kernel Panic
Juan B Salas akadaro
Pano iwe download https://support.apple.com/es-es/HT208202
Pindura Juan B Salas
pane imwe nzira ... yakati rebei asi inoshanda kana iwe uchida kutora iyo USB ine OS Sierra (sezvo ini ndisingavimbe neshanduro dziripo kuburikidza nehova). Iko kudzikisira kuEl Capitan ... mune iyi vhezheni kana iwe uchikwanisa kuona OS Sierra muchikamu chakatengwa, chiitore pasi uye gadzira iyo USB.
Carlos Leon akadaro
Ndine kushandisa saha yepamusoro, asi sezvo ndinayo, yangu MacBook Pro inononoka kupfuura zvakajairwa, inovhara maapplication, zvinotora nguva uye zvinondinetsa ... handina mufaro.
Pindura kuna carlos leon
Paqui Ku akadaro
Ndiri naCarlos Leon, sezvo ini ndaisa yakakwira saw mune iyo macbook pro iyo mbatatisi ine makiyi. Ini ndaive ndakanakidzwa neSierra, zvese zvainge zvakatsetseka uye zvichishanda. ine sierra yepamusoro zvinhu zvese zviri kuparara, zvinotora makore chiuru kutanga zvichienzaniswa neye yapfuura uye zvese zvinovhara, zvinorembera kana kungoti zvirongwa zvacho hazvipindirane neiyo fomati nyowani. Huya, vangadai vakataura kuti kunyangwe iri yepamutemo vhezheni, inoita senge beta mune yayo yechipiri chikamu zvakanyanya. Ini ndinofungidzira kuti uchave iwo mutengo unofanirwa kubhadharwa kuve wakasununguka system, asi huya ... nguva inotevera ini ndichamirira zvishoma ndisati ndavandudza
Pindura Paqui Kuti
Izvo zvakafanana zvakaitika kwandiri seyekupedzisira 2. Tose takavandudza mu (dhizaini) hofisi uye makomputa ekare (pakati pa2009) ari kutambura zvakanyanya… uye ese ari kunonoka. Kunze kwekuti isu tapererwa ne font font plugins (FontAgent) nekuti inopa matambudziko mazhinji uye ndine chokwadi kuti ndiyo yakashata MacOs.
Zvakatora nguva yakareba kuti dzigadzirise michina uye zvino inguva yakawanda yakawanda yekudzikisira ... ini handikurudzire kune chero munhu. Zvirinani izvozvi!
Mauricio Penagos akadaro
Nhasi ndaenda kuHigh Sierra uye Office 2010 yakamira kushanda neSierra, zvanga zvakanaka. Chii chandingaite izvozvi? Ndinofanira kutenga Hofisi nyowani?.
Chinhu chakashata ndechekuti ine yakachena software (Dr. Cleaner) ini ndakachenesa komputa yese, system junk mafaera, nezvimwe.
Pindura Mauricio Penagos
Juan David akadaro
Iwe unongofanirwa kuisa iyi link kubva kune imwechete apple https://support.apple.com/es-cl/HT208202Zvinokutora iwe kuchitoro cheapps ichikuratidza iyo MacOs Sierra vhezheni kuti ugone kurodha kune yapfuura vhezheni, kurodha uye anotarisira zvese.
Pindura Juan David
Mhoro! Iyo haindibvumidze kuti ndiiise, inoti yachembera vhezheni, unoziva here zvandingaite kuti ndiise?
Mhoro! Hazvitenderi kuti ndiisewo, inoti zvakare yanyanyisa vhezheni, pane chero munhu anoziva zvekuita kuiisa?
Mune dzidziso, izvo zvinoratidzira ndezvekuti pane yakagadziridzwa vhezheni yakaiswa pakombuta uye iwe unongofanirwa kumanikidza kuenderera uye ndizvozvo.
Mhoroi, iwe unogona kuenda kubva kuHigh Sierra vhezheni kuenda kuSierra ine High iri iyo hwaro hwekushandisa system?
Kana zvirizvo, garandi yarasika here?
Rogelio Arrambide akadaro
Makadii, ndiani angandibatsira ??, ndanga ndine nguva yakareba yapfuura yeSierra, (ndinofunga El Capitan?) Uye ini ndakachinja dhisiki kuti rive rakasimba uye WOOOWW yangu MacBook Pro yakashanda zvinoshamisa kunonoka kwa2011….
Zvese zvaive zvakanaka uye ini handifarire kuvandudza iyo OS painenge iri nyowani nekuti ivo VANOGARA vanounza mabugs, saka kusvika masvondo maviri apfuura apfuura ndakafunga kumutsidzira kuSierra, zvese zvakanaka zviripo uye ndinofunga kukanganisa kwangu kwaive kuti ini ndakaona kuti iyo nyowani nguva yeHigh Sierra uye mazuva mashoma gare gare, ini ndakakwidziridzira kuHIG Sierra uye kubva ipapo musoro wangu wakatanga !!!!!
Chekutanga, 32bit mafomu aisazoshanda, izvo mune iyi nyaya ndakashanda zvakaringana neHofisi 2011 kana 2010, ini handizive saka izvozvi neizvi ndinofanira kutenga imwe nyowani, saka ini ndakatanga ndafunga kuitsvaga YouTube uye kurodha pasi iyo 2016, kushamisika kwangu yaive 32bit futi !!!!! ... Zvisinei, chokwadi ndechekuti muchina uchinonoka, kana uchipuruzira mune zvimwe zvikamu waiita kunge 486 kubva 2000 uye zvakawandisa mune zvimwe zvikamu. yainonoka zvakanyanya kupfuura zvayaive. pamberi….
Iye zvino, HANDIKWANISI KUPINDA !!!, kana ndikasvika pakudhinda neshanduro iyi nezvose, asi kubvira nezuro, iyo printer iri kumbomira, iwe unotumira chimwe chinhu kuti uprinte, chinosvika pane chinyorwa chinyorwa uye pa «bhatani play» inoti tangazve kudhinda, iwe uchidhinda, zvinotanga senge zvave kuda kutanga, inomhanyisa gwaro bharanzi uye mushure memasekonzi 3-4, inodzokera munzira imwecheteyo, nyaya ndeyekuti kana ndikakwanisa kuprinta pane imwecheteyo purinda multifunctional HP, kubva kune imwe komputa, kubva ku iphone, nezvimwewo. Ini ndinotovhura iyo HP Utility, ini ndinodhinda nguva yekuyedza ndoipurinda, ndinoipa scanner uye inoshanda…. ZVESE DAMBUDZIKO NDOKUDZIDZA kubva kuMacBook yangu ...
Ini ndatoita zvese, kumisazve kudhinda pre, enda kuraibhurari uye kuteedzera iyo com.apple.impresion, nezvimwewo, bvisa woisa purinda zvakare, ZVESE !!!.
Kusahadzika kwangu kwakaoma sei kudzoka kuSierra, mune imwe yeaya kusvika Capitan, nekuti kopi yekupedzisira yekuchengetedza yandinayo, yaive pandakanga ndiri Sierra, neHigh Sierra ini handisi kuseta muchina wenguva kuti uite Copy, asi Ndiri kutya kuti ndikaita backup neHigh Sierra, handichagona kuishandisa muSierra, zvisinei, iyo kopi yatove nemavhiki maviri ekuzvarwa uye ini ndanyatsogadzirisa mamwe magwaro, kunyanya Dropbox !!! ..
1.- Ndingaite kopi yekuchengetedza kuitira kuti iri rive razvino zvinyorwa zvangu uye kubva ipapo ndinogona kuita nzira yese yekudzorera Sierra uye ndinogona kunama kopi ndisina kukumbira kuti ndivandudze kuHigh Sierra?
2.- Ini ndichave nechero rimwe dambudziko iro iro MacBook rakakurudzirwa?
3.- Ndingaite here pane imwe nguva kufunga kuti mashandiro andakaita neCapitan, ndingagone here neHigh Sierra?
4.- Ndeipi njodzi dzekungoteedzera iyo Dropbox dhairekitori kuti ushandise kopi yeSierra yekuchengetedza uye nekungotsiva Dropbox?
5.- Dambudziko reprinta rakabatana here?
Pindura Rogelio Arrambide
Federighi inosimbisa kuti Fusion Drives ichaenderana neiyo APFS system